Iindaba-Kutheni ufuna ukufumana umenzi wakho wePCB eTshayina
I-China lelona lizwe liphezulu lipapashiweyo ibhodi yesekethe yexabiso lemveliso yelizwe. Okwangoku, ixabiso lokuvelisa i-PCB eAsia lisondele kwi-90% yetotali iyonke. Phakathi kwabo, i-China kunye ne-mpuma ye-Asia zikhula ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, kutheni ufuna ukufumana umenzi wakho wePCB eChina?
Xa kuthelekiswa namazwe akumazantsi mpuma eAsia, i-China ayisiyiyo kuphela imveliso yokufumana izinto eziluhlaza kunye nexabiso eliphantsi, amandla ayo okuvelisa kunye neenkcukacha zobuchwephesha ziyahlangabezana neemfuno zabathengi bamanye amazwe. Imakethi yaseTshayina inokubonelela ngezixhobo ezaneleyo zeprojekthi yakho. Ngophuhliso olukhawulezayo lobuchwephesha eTshayina, izixhobo zokuvelisa i-PCB nazo ziphuculwe kakhulu. Kule ntengiso inkulu, unokufumana ngokulula umenzi we-PCB onokubonelela ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho ophezulu. Esi sizathu sokuba i-PCB yokuvelisa eTshayina iya isiba ngakumbi nangakumbi.
1. Ukunciphisa iindleko zakho zokwenza imveliso?
Kushishino lokuvelisa PCB, iindleko zabasebenzi kuchaphazela kakhulu iindleko zemveliso PCB. Ukuba neendleko zabasebenzi ezisezantsi kwimakethi yaseTshayina kunokunciphisa kakhulu iindleko zakho zePCB. Ukongeza, ngophuhliso olukhawulezayo lwetekhnoloji yaseTshayina, unako Intengiso yaseTshayina ifumana inani elikhulu lezinto ezizezinye ezinamaxabiso asezantsi, ezinokugcina imali eninzi ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwemveliso. E-China, ulwabiwo lwezixhobo lolona lula. Ukongeza kwimveliso enye, abenzi be-PCB baseTshayina banokubonelela ngenkonzo yokumisa, ukusuka koyilo lokuqala lwe-PCB ukuya kwindibano yokugqibela yemveliso egqityiweyo, unokuqiniseka ukuba ungayishiya kumenzi we-PCB wase-China ayigqibe. Ukongeza, i-China inenkqubo yokuhamba kwempahla efanelekileyo kunye nokuhamba okufanelekileyo. Ngaba unokunciphisa ixesha lokuhanjiswa kwempahla ukuqinisekisa ukuba ixesha lihamba kunye nokhuphiswano lweemveliso.
2.Ufumana njani umenzi wePCB ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho ophezulu
Ngenxa yentengiso enkulu ye-PCB e-China, iinkonzo zabenzi bebhodi yesekethe azifani. Ke ungabafumana njani abenzi bePCB abancinci nabakumgangatho ophezulu kumawakawaka eefektri zebhodi yesekethe?
Abavelisi be-PCB abalungileyo baya kuqaphela abathengi ngentliziyo iphela, bashenxise onke amathandabuzo kubathengi, kunye nokunciphisa iindleko zabathengi.
1. Ukuba ngabavelisi PCB ukunika ikowuteshini ecacileyo kuquka isakhiwo ixabiso
2. Ukuba ngabavelisi be-PCB bakulungele ukunika naluphi na uluvo olusebenzayo lokunciphisa iindleko zakho.
3. Ukuba ngabavelisi be-PCB bahlawulisa nayiphi na indleko engekho ngqiqweni emva koku-odola.
4. Ngaba basebenzisa naziphi na izinto ezingaziwayo ngaphandle kwemvume yakho.
I-PHILIFAST ijolise kwiinkonzo ze-PCB EMS ngaphezulu kweminyaka eli-10, kwaye ibonelela ngamaxabiso aphantsi.
Ikwabonelela ngeengcebiso zobungcali kubathengi ukunciphisa iindleko zabathengi ngenkqubo ecwangcisiweyo ecacileyo.
Ixesha Post: Jul-14-2021